Blog - Cutis Care
Read our latest Health advice
नेपालका विभिन्‍न स्थानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कम गर्न ‘डिसइन्फेक्सन स्प्रे’ गरिहेको देखिन्छ । विभिन्‍न स्थानमा सवारीमा तथा हिँडिरहेका मानिसहरुको अनुहारमा पर्ने गरी यस्तो ‘डिस्‍इन्फेक्सन स्प्रे’ गरिँदै आएको छ । आइतबार मात्रै पनि काठमाडौंको ओमबहालमा सडकमा हिडिरहेका मानिसहरुको अनुहारमा पर्ने गरी यस्तो स्प्रे गरिएको थियो । तर, चिकित्सकहरुले भने यस्ता स्प्रेले मानव शरीरमा परेमा विभिन्‍न समस्या […]
होली खेल्दा सकेसम्म हर्बल रङ प्रयोग गर्नुपर्छ। हर्बल रङले छालालाई नोक्सान गर्दैन। छालाको रोग भएकाले होली खेल्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। छालालाई रङको प्रभावबाट बचाउन सनस्क्रिन वा भिटामिन ‘ई’युक्त क्रिम अथवा म्वइस्चराइजर लगाउनुपर्छ। यसो गर्नाले छालामा रासायनिक प्रभाव कम हुने हुन्छ। होलीमा छालालाई रङको प्रभावबाट जोगाउन शरीर ढाक्ने गरी पहिरन लगाउनुपर्छ। हात र नङलाई रङबाट बचाउन […]
काठमाडौ — रंग पर्व होली संघारमै आइपुगेको छ । उमंगको यो अवसरलाई यही रूपमा सम्भिmरहन भने थोरै सावधानी अपेक्षित हुन्छ । रंग खेल्दा सचेत भइयो भने होलीको रौनक पनि रहिरहन्छ, तपाईंको स्वास्थ्यमा समेत कुनै असर पर्दैन । रंग पर्व होली संघारमै आइपुगेको छ । उमंगको यो अवसरलाई यही रूपमा सम्भिmरहन भने थोरै सावधानी अपेक्षित हुन्छ । रंग खेल्दा सचेत भइयो […]
जतिबेला अहिले जस्तो व्यावसायिक रूपमा रङ उपलब्ध हुन्थेनन्, त्यतिबेला होलीमा पानको पातबाट, गुलाब पत्र, सयपत्री, पालुंगो, बेसार, मेहदी आदिबाट तयार पारिने प्राकृतिक रङ एकापसमा दलेर होली मनाइने गरिन्थ्यो। होली रङहरूको पर्व हो। यो दिन विभिन्न किसिमका रङ एकापसमा दलेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ। तर, आफ्नो छालाको अवस्था र रङमा प्रयोग भएको केमिकलबारे जानकारी नहुँदा होलीलगत्तै छालामा […]
सामान्यतया कपाल फुल्नु (सेतो हुनु) लाई बुढ्यौली लागेको उपमा दिइने गरिन्छ । तर कपाल फुल्नेबित्तिकै बुढ्यौली नै लागेको भन्नु चाहिँ सही हुँदैन । आजभोलि कम उमेरमै कपाल फुल्नु धेरै नेपालीको साझा समस्या बनेको छ । उमेर पुगेपछि कपाल फुल्नु स्वभाविक भएपनि कम उमेरमै कपाल फुल्ने समस्याले धेरैलाई सताउने गरेको छ । सेतो कपालबारे सेतो दुवी […]
काठमाडौं– कपाल प्रत्यारोपण तथा सौन्दर्यताको विषयमा कुरा उठ्ने वित्तिकै डाक्टर धर्मेन्द्र कर्णको नाम धेरैले लिन्छन् । धुलिखेल अस्पतालका छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा.कर्णले लामो सयमदेखि छाला र कपालसम्बन्धी समस्याका भोगेका हजारौं बिरामीलाई खुसी दिएका छन् । छाला तथा कपाल सम्बन्धी समस्याबाट चिन्तित बनेका हजारौं बिरामीलाई खुसी दिने डा.कर्णको विगत र चिकित्सा शिक्षाको यात्रा भने […]
काठमाडाैं । पछिल्लो समय मानिसहरु बढी व्यस्त हुने हुँदा कपाल झर्ने समस्या बढी देखिने गरेको छ । कपाल झर्ने समस्या बढ्दै गएर कम उमेरमै तालुपना देखिन्छ । जसले गर्दा हिनताबोधसँगै तनावको समस्या ल्याउछ । अब त्यस्तो हिनताबोध र तनाव लिएर हिड्नुपर्ने दिन छैनन् । नेपालमा नै सस्तो मूल्यमा कपाल प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । तर कपाल प्रत्यारोपण […]
Many people believe that cosmetic surgery can rise up their level of confidence. Well, what are your reasons for considering this? I am Sudip and look younger. Younger inasense of good looking handsome guy with not much pigmentary spots on my face, free from fine line wrinkles with shiny skin tone but no […]
Our Health With: Dr. Dharmendra Karna // नेपालमा कपाल प्रत्यारोपण (Hair transplant in Nepal)